Global Voices teny Malagasy » Nanatevina Ireo Fihetsiketsehana Ny Iraniana Ho Fanohanana An’i Kobane, Sisintany Syria-Tiorkia, Ataon’ny ISIS Fahirano · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Oktobra 2014 3:02 GMT 1	 · Mpanoratra Mahsa Alimardani Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Iràna, Syria, Tiorkia, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana
Afisy amin'ny teny Kiorda sy Persiana, miantso famoriam-bahoaka eo anoloan'ny biraon'ny Firenena Mikambana ao Iran ho fanohanana an'i Kobane tamin'ny 8 Oktobra 2014.
Nidina an-dalambe ireo mpanao fiihetsiketsehana ao Iran sy ny hafa manerantany mba hanohana am-pahibemaso ny vahoakan'i Kobane , tanàna Syriana Kiorda eo akaikin'ny sisintany izay miezaka mafy manohitra ny ISIS.
Niharan'ny fanafihan'ny ISIS, sampana avy tao amin'ny Al Qaeda tonga hifehy ny faritra midadasika ao Iraka sy Syria amin'ny alalan'ny fampiasana paikady maherisetra sy mahery vaika ny tanànan'i Kobane nanomboka ny tapaky ny volana Septambra, ka vahoaka teo amin'ny 200.000 teo no nitsoaka nankao Torkia mpifanolo-bodirindrina aminy. Na dia niharan'ny fanoheran'ny tafika Kiorda aza ny ISIS, hatramin'ny nanavaozana ity lahatsoratra ity farany, dia nirohotra tao afovoan-tanànan'i Kobane ny ISIS.
Miteraka tsy fifankahazoan-kevitra ara-jeopolitika ny fanampiana ny vondro-tafika ao Kobane nandritra ny fahamafisan'ny fanafihan'i ISIS indrindra, indrindra eo amin'ireo mpisehatra rezionaly voalohany: Torkia, Iran ary Etazonia.
Nanamafy ny daroka an'habakabaka  ny firaisankina tarihin'i Etazonia nanomboka Talata, izay namelezana ny ISIS tamin'ny manodidina an'i Kobane, niantso an'i Etazonia ny governemanta Tiorka miaraka amin'ny tafika Kiorda mba hanamafy ny ezak'izy hirotsaka an-tanety hisorohana ny tanàna tsy ho voafehin'ny ISIS tanteraka.
“Tsy hifarana ny fampihorohorona … raha tsy hoe miara-miasa amin'ny alalan'ny bemidina an-tanety isika”, hoy  ny filoha Tiorka Recep Tayyip Erdogan tamin'ny vaovan'ny Al Jazeera omaly. “Milaza amin'ny Tandrefana aho – fa tsy hitera-bahaolana ny fidarohana baomba an'habakabaka.”
Nanohitra ny fitsabahan'ny tandrefana ao an-tanàna na dia izany aza ny governemanta Iraniana, miantso ireo firenena mba hanohana ny governemanta Syriana ho fanoherana ireo tafika ISIS ao Kobane. Nandritra ny valan-dresaka hoan'ny mpanao gazety tamin'ny Talata, nanipika ny maha-zavadehibe ny fanohanana an'i Syria ny mpitondra tenin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Marzieh Afkham, ary hijery akaiky ny ahiahian'i Iran mahakasika izany toe-draharaha izany. Hoy izy tamin'ireo mpitati-baovao: “Handefa fanampiana mahaolona amin'ireo mponina sy mpitsoa-ponenana ao amin'ity faritra ity amin'ny alalan'ny governemanta Syriana ny Repoblika Islamika.”
Mpiara-dia akaikin'ny filohan'i Syria iharan'ny fahirano, Bachar Al-Assad, i Iran. Olona maherin'ny 191 000 no namoy ny ainy tao anatin'ny ady an-trano mihoso-drà naharitra ela noho ny fitadiavana fifehezana an'i Syria eo amin'ireo tafika matoky an'i Al-Assad sy ireo andia-tafika manohitra ny fitondrany, izay nitsangana voalohany nandritra ny fielezan'ny fihetsiketsehana Lohataona Arabo manerana ny renim-paritra. Nanararaotra ny tolona ny ISIS mba hibodo ny tany ho azy manokana, ary voampanga ho nanome alalana ny vondrona hanao izany i Al-Assad.
Nandritra izany fotoana izany, teraka ireo fihetsiketsehana ho fanohanana ny fanampiana maha-olona ao anatin'i Kobane. Naneho ny firaisankinany tamin'ny herinandro lasa teo ny Iraniana, mitsikera matetika ny tsy fisian'ny fanampiana maha-olona sy ny tsy fihetsehan'i Tiorkia manoloana ny zavamisy. Niantso ny hanamafisana ny fanohanan'ny miaramila avy ao Torkia ihany koa ny Kiorda; mpanao fihetsiketsehana Kiorda 12 farafahakeliny no namoy ny ainy taorian'ny fifandonana tamin'ny polisy Tiorka.
Nalaza tao amin'ny media sosialy ho mariky ny fanohanana avy aminy ny diezy Twitter #TwitterKurds, #Kobani sy ny #کوبانی .
Ordogan, atsaharo ny fanohanana ny fampihorohorona. Nivorivory hoan'i #Kobane ao #Tehran ireo mpanao fihetsiketsehana
Nidina an-dalambe ho firaisankina miaraka amin'ny vahoakan'i Kobane ny Iraniana tao an-tanànan'i Sandaj, araka ny hita ao amin'ity lahatsary nozarain'i Radio Farda  ity:
Nisy ihany koa ireo fihetsiketsehana nokarakaraina tany ivelany, tahaka ity tao Berlin ity:
Manao fihetsiketsehana ho fanohanana an'i #Kobane eo anoloan'ny Masoivoho Amerikana sy ny Brandenburger ny Kiorda ao Berlin
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/10/13/64819/
 Nanamafy ny daroka an'habakabaka: http://www.washingtonpost.com/world/airstrikes-target-islamic-state-positions-near-embattled-kobane/2014/10/07/122c9a76-1bba-4c8c-a3df-16e5a0545bb0_story.html
 valan-dresaka hoan'ny mpanao gazety : http://www.iran-daily.com/News/2969.html
 Olona maherin'ny 191 000 no namoy ny ainy : http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48535#.U_y4aPnUZp0
 namoy ny ainy taorian'ny fifandonana : http://www.bbc.com/news/world-europe-29531728
 Radio Farda: http://www.radiofarda.com/media/video/f5-koubani-support-in-sanandaj-iran/26625837.html